Ngokuhamba kwesikhathi, iyiphi Omuny ucela, nendlela upheke inkukhu isobho? Yiqiniso, labapheki wazibonela abajwayelene kahle nale eqotho ngempela, kodwa indlela ukuba intsha nabangenakho okuhlangenwe nakho? Ngempela, zaphetha inyoni - lena ifomu ezingabizi kunayo inyama, okuyinto angathengwa at cishe kunoma iyiphi esitolo, esitolo noma emakethe zokudla. Inkukhu kanye esisemqoka ngokuphelele kumenyu wezokudla, njengoba iqukethe esiningi amafutha. Inkukhu umhluzi ingalungiswa cishe zonke amasobho, okuyinto okuphekwe yemifino, amakhowe, inhlanzi nenyama umhluzi: isobho, amanzi okugqumisa, hodgepodge, amazambane, i-pasta kanye noma cereal, isobho - yebo noma yini! Kodwa ukunambitha inkukhu umhluzi kanye flavour ambalwa obucayi, ngakho musa ukubekezelela ukuhlukunyezwa izinongo hot futhi ezinuka kamnandi.
Nakuba ngezithukuthuku izinongo ungenza izichibiyelo ezithile - konke kuncike abantu abathile Culinary owakhelwa isobho okulungiselelwe. Ngokwesibonelo, inkukhu isobho nge corn ngeke kunganambitheki uma engeza pepper kancane black njll Ngaphambi indlela ukupheka inkukhu isobho for iresiphi ekhethiwe, kudingeka alungiselele umhluzi. Futhi lokhu, ungasebenzisa hhayi kuphela wonke inkukhu izidumbu, kodwa futhi amathambo futhi offal - esiswini, inhliziyo, ekhanda, emqaleni nasemhlane, amaphiko kanye nasemilenzeni. Uma ufuna ukuthola umhluzi wezokudla kusukela isikhumba namafutha kungcono ukuqeda. Lokhu kusebenza ikakhulukazi ezimweni lapho ukudla okunamafutha is contraindicated ngenxa yezinkinga zempilo. imikhiqizo Inyama okulungiselelwe ngamanzi abandayo bese ngomlilo. Uma umhluzi uye abilisiwe, udinga ukususa Foam futhi uthele amanzi ngokucophelela ukuze bagweme scalding. Khona-ke aphinde uthele amanzi abilayo phezu inyama, usawoti bese uqhubeke ukupheka, kodwa ngesikhathi umlilo kancane. Ngemva kwesigamu sehora ukubeka anyanisi ehlutshiwe izimpande white. Ekupheleni umhluzi ukupheka elicwengekileyo.
Umhluzi usulungile, futhi manje kubalulekile ukufunda indlela ukupheka inkukhu isobho, isibonelo, i-Moscow. Kulesi isobho engeza ukhukhamba, ngakho-ke kungenziwa ngokuthi i amanzi okugqumisa. Ungakwazi ukupheka inkukhu isobho nge iklabishi, ngokulandelana, udinga ukwengeza iklabishi. Thatha 1 isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi Parsnip, parsley impande 2, 1 no-2 izaqathe ama. Zonke Chop, izaqathe kanye anyanisi kanye gazinga ngobumnene ukubeka. Sika 100 amagremu isipinashi kanye Sorrel, 2 ukhukhamba simmered endaweni Skillet. Ngo umhluzi abilayo (1.5 amalitha) wafakwa izimpande, anyanisi ethosiwe kanye izaqathe, ukhukhamba futhi thumba imizuzu 10. Bese wengeza isipinashi kanye Sorrel amahlamvu, ikhukhamba amanzi okugqumisa, izinongo, usawoti kanye ibila kuze ithenda. Lapho isicelo ipuleti ngamunye ukubeka izingcezu inkukhu inyama, offal, amakhambi 2 isipuni Iqanda-ubisi ingxube okuyinto ibhalwe kanje. 2 ezithathwe isikhuphasha 300 amagremu abandayo abilisiwe ubisi noma ukhilimu in a okugeza amanzi ingxube lilungisiwe ukuze ukufingqa, bese elicwengekileyo. Awu iyasebenza kule khekhe isidlo nge cottage shizi.
Omunye iresiphi ezithakazelisayo - isobho okumnandi e baseMoldova, kuba simnandi kakhulu, futhi uzilungiselele ngokushesha. 1 isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi impande futhi sibe yimichilo 1 Morkovin gazinga e imajarini noma bhotela. Lungiselela pan mncane umusi omelet kusuka amaqanda 2 futhi ½ ½ inkomishi yobisi. Ngo 1-1.5 amalitha umhluzi engeza citric acid kuze kufike esihlokweni selinye ikhaba, sautéing yemifino, amagremu 100 of eluhlaza uphizi okusemathinini, izingcezu inkukhu, sibe yimichilo Omelette futhi ubilise imizuzu 3. Lapho isicelo ipuleti ngamunye abafafazwe imifino oqoshiwe, ukuthi uyonika ukunambitheka ekhethekile futhi iphunga kakade ukudla ngomumo. Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukupheka inkukhu isobho ngokushesha futhi esihlwabusayo. Kodwa musa ukuphumula azithele ngabandayo yethu umphumela, ngoba ukulungiswa zokupheka ziningi. Futhi nawe nakanjani kudingeka uzame bonke ukucacisa iresiphi ethize futhi kwenze kube esekelwe isignesha yabo dish!
Ukwelashwa ukushisa of inyama kanye nenyama imikhiqizo
Isikhungo Health: 2 umtholampilo Smolensk
Uyini isiqephu: shades of incazelo yegama elithi
Indlela ukubheka MOE ezizibeni nokuthi kufanele thunga?
Thenga "Okey" Petersburg: amakheli, evula amahora kanye nokubuyekeza
Diffuser - kungcono ngoba ingxenye?